Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 17 qof ayaa ku dhaawacantay qarax bambo weyn oo ka dhacay Los Angeles
Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Qaraxa ayaa ruxay xaafada, wuxuu rogay baabuurtii ka agdhaweyd, muraayadaha oo burburay iyo guryo waxyeello u geysanayay maadama ay qiiq aad u badan hawada u dirtay.
Booliska Los Angeles ayaa maalintii oo dhan qaatay guri ay ku keydsanaayeen rash aad u fara badan.
16 ka mid ah f 17kii qof ee dhaawacmay waxaa loo qaaday isbitaalka.
Waxaa jiray "gebi ahaanba masiibada masiibada ee gaariga xakamaynta," sida laga soo xigtay LAPD.
Kooxda LAPD ee bambaanooyinka iskudayay inay baabi'iyaan keydka rashka sharci darrada ah ayaa ku dhammaaday qarax weyn oo baabi'iyay Waaxda Bilayska Los AngelesGawaarida gaashaaman, waxaa ku dhaawacmay 17 qof, oo ay ku jiraan 10 sarkaal oo bilays ah, waxaana loo baahan yahay in laga guuro guryaha ku dhow.
17-ka qof ee dhaawacmay, 16 ka mid ah ayaa loo qaaday isbitaalka iyadoo mid ka mid ah uu hoos u dhigay ikhtiyaarka ah in la qaado.
Qaraxa wuxuu yimid abaare 7:30 pm fiidnimo Arbacada 700 oo xero oo ku taal wadada East 27th Street, halkaas oo boolisku maalintii ku qaatay inay guri badan ka kexeeyaan rash badan. Waxay la kulmeen ilaa 40 aaladaha guryaha lagu sameeyo ee loo yaqaan "coke can-size" oo ay ku jiraan budo iyo fiyuusyo, iyo 200 aalado yaryar oo la mid ah. Kooxda bambooyinku waxay go'aansadeen inay yihiin "dad aad u deggan."
Aaladaha waxaa loo wareejiyay "gawaarida xamuulka ah" oo leh qol bir ah, oo loogu talagalay in lagu xareeyo walxaha qarxa oo si nabadgelyo leh loo qarxin karo.
Markii alaabada la qarxiyay waxyar ka dib 7:30 pm Arbacadii, waxaa jiray "wadarta masiibada ba'an ee gaariga xakamaynta," sida laga soo xigtay LAPD.
Ilaa sagaal qoys oo ka tirsan xaafadda ayaa ka barokacay guryahooda qaraxa ka dib.
Waaxda Booliska Los Angeles ayaa sheegtay in qaraxa la baari doono inta lagu guda jiro maalmaha soo socda. Baarayaasha dowladda federaalka ayaa la filayaa inay gaaraan goobta gelinka dambe ee Khamiista.